Soosaarayaasha & Shirkadaha Spectrum oo Buuxda | Shiinaha Warshad Spectrum Full
Nalalka istudiyaha sare ee TLCI index
Sharaxaadda Alaabada Tixda istuudiyaha ah ee nalka LED-ka (Ra = 98 ± 2, Rf> 90, Rg = 100 ± 2) oo leh CRI sare, daacadnimo iyo midab midab leh oo si muuqata u xoojiya muuqaalka walxaha iyagoo u oggolaanaya midabada inay u muuqdaan kuwo hufan oo muuqaal leh toogashada kamaradda. Isweydaarsiga iftiiminta iftiinka sare ee telefishanka ayaa damaanad qaadaya waxqabadka midabka heer sare ee shaashadaha. Astaamaha Muhiimka ah index Heerka sare ee CRI / Rf / Rg (TM-30-15) ● R1-R15> 90 index Tilmaamaha TLCI ee Sare Nambarka Badeecada Lagu qiimeeyay danab lagu qiimeeyay hadda ...
Tayo sare oo leh midab kafiican
Sharaxaadda Alaabada taxane u eg Qorraxda oo leh CRI sare iyo aaminnimo sare ee taxanahan ayaa soo celinaya midabka runta ah ee badeecada, iyo waxyeellada iftiinka buluugga ee hooseeya waxay si wax ku ool ah u ilaalisaa indhaha iyo aragtida. Intaas waxaa sii dheer, taxanahan waxaa sidoo kale ku jira midab buluug ah, oo door aad u wanaagsan oo waxtar leh u leh baahiyaha dhirta iyo bakteeriyada. Astaamaha Muhiimka ah fid Daacadnimo midabkeedu sarreeyo gam Midab hagaagsan gamut Rg prop Saamiga hoose ee iftiinka buluugga waxyeellada leh Nambarka Waxsoosaarka la qiimeeyay [V] Lagu qiimeeyay hadda [mA] CC ...